Inzululwazi (Ngolwimi lwesiLatini kuthiwa yiscientia, oko kuthetha ukuthi "Ulwazi") yinkqubo eyenziwa ngezicwangciso, ngeendlela ezamkelekileyo nangemiqathango yophando kwinzululwazi ngendlela eyakwenza ukuba kubelula ukuba luvavanywe kunjalo nje luphicothwe, kutsho kubelula ukwenza uqikelelo ngeziphumo zophando olwenziwa kweli phakade. Yonke ke le miqathango yophando kufuneka ilandelwe ngenyameko xa kuqokolelwa ulwazi olu loluhlobo.  Kwintsingiselo yakudla nekuyeyona ibusondela kule, inzululwazi ikwabhekisa kuhlobo lolwazi olunokugocwa-gocwa ngemibuzo ze ke ngoko lube lwakheke phezu kwezizathu ezivakalayo nezinokuthi zichazwe ngokwamanqaku avakalayo ze ke ngoko lube lulwazi ekunokungqiyanywa kulo ngenxa yokuthembeka kwalo ingakumbi xa lusetyenziswa. Lowo usebenza ngobunzululwazi kuthiwa yingcali yezophando.
Kwisigaba sexesha elide , inzululwazi njengohlobo lolwazi yayisondele kakhulu ngonxibelelwano kwiFilosofi.
Inzululwazi yile nto siyenzayo xa sifuna ukufunda ngokwenzeka kwindalo yehlabathi. Iyiphysics, ikhemistri, ibayoloji, igeology kunye ne-astronomy. Kwinzululwazi kusetyenziswa imathematics, kwaye into okanye isenzeko sifundwa ngobunjalo bayo, sijongiwe, size sihliwe amahlongwane phezulu, sigocwagocwa, ize emva koko loo nto kuphandwa ngayo ikhe ilingwe ngeenjongo zokujonga okokuba oko kulindeleke kuyo kuzakwenzeka na. Inzululwazi ikhupha ulwazi oluchanekileyo nolungenamakhwiniba, imithetho yakwanzululwazi, kunye netheori  'inzululwazi' ikwabhekisa kulwazi oluninzi yolwazi oluthe lwafunyanwa ngokusebenzisa le nkqubo. 
Uphando lobunzululwazi lusebenzisa iindlela zophando zakwanzululwazi. uphando lobunzululwazi lusebenzisa isiphakamiso (hypotheses) esisekwe phezu kwezimvo okanye phezu kolwazi osele lukho kakade. Ngoko ke ezi ziphakamiso ziyaphicothwa ngokuvavanywa kwii-experiments.
Bonke abantu abafunda bekwaphanda ngeenzame zokufumanisa yonke into ngobunzululwazi babizwa ngokuba ziingcali zabaphandi. Ezi ngcali zifunda izinto ngokuthi zijonge kwizinto ezifunda ngazo ngononophelo, ngokuthi zenze umlinganiselookanye zimente ezi zinto, zize zenze le misebenzi apho zizakukhe zilinge khona ze ziphinde zikuvavanye konke oko. ezi ngcali zenza zonke iinzame ukuze zichaze okokuba kutheni na izinto zisenzeka ngale ngendlela ezenzeka ngayo, zize ziqikelele okuzakwenzeka.
Iindlela zokwenza uphando lobunzulwazi[tshintsha | edit source]
Namhlanje, "inzululwazi" isoloko ibhekisa kwiindlela zokufumana ulwazi, ingekuko ukufumana uqobo lolwazi kuphela. Ijongene kuphela nokwenzekayo kwizinto ehlabathini.  kwinkulungwane yeminyaka ye-17 neye-18 iingcali kwezenzululwazi bathi gqolo ukuseka ukwakhiwa kolwazi ngokwe "mithetho yendalo" enjengeNewton's laws of motion. Kwaza kwathi xa sele kudlule inkulungwane ye-19, igama elithi "Nzululwazi" liya linxulunyaniswa ngakumbi nendlela yokuphanda ngokobunzululwazi, njengendlela yokufunda indalo esemhlabeni, kuquka iphysics, ikhemistri, igeology kunye nebayoloji.
Ezinye iimpawu zenzululwazi[tshintsha | edit source]
Inzululwazi yenza imizekelo efumaneka kwindalo, [[models of our universe}imizekelo efumaneka kweli hlabathi]], kunyenamachiza. Zininzi ke iintlobo-ntlobo ezifumaneka kwanzululwazi, kunjalo nje zinamagama azo. Nangona kunjalo, akufuneki ukuthi "inzululwazi ithi" nayiphi na into. Inzululwazi yinkqubo, akuyonyaniso okanye ingqokolela yenyaniso nje kuphela, kungeyomithetho ekukholelwa kuyo ngaxesha nye.
Ezinye iintlobo zenzululwazi[tshintsha | edit source]
Imithombo[tshintsha | edit source]
Retrieved from "https://xh.bywiki.com/w/index.php?title=Inzululwazi&oldid=29319"